Ke, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi? | US Taalsentrum
Op 05/03/2020 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale, Skryflab geplaas
Iziko leeLwimi yindawo ezele ludlamko yabafundi, abasebenzi nabaxumi abadinga uncedo kwezeelwimi nezonxibelelwano.
Omnye weyona misebenzi yethu ibalulekileyo kukunceda abafundi ukuba bakwazi ukuthetha ngokwaseyunivesithi. Nangona ulwimi lwemfundo ephakamileyo lungelwimi lweenkobe lwamntu, ungaqhuba kakuhle kakhulu kulo xa sele uzifunde zonke iinkalo zalo.
Siyabanceda abafundi ukuba bafikelele apho, oko sikwenza ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ezinxulumene neelwimi:
Sizisa iimodyuli ezinconyiweyo ezingobuchule bokufunda nokubhala kwimfundo ephakamileyo kwiifakhalthi ezi-7 kwezili-10 zale Yunivesithi ukuxhobisa abafundi bethu ngesakhono sonxibelelwano oluchuliweyo – kwimeko yemfundo ephakamileyo nakwimisebenzi yabo nakuhlobo lomsebenzi abawusebenzayo. Ezi modyuli zigxile kunxibelelwano lwasemsebenzini, oloshishino nolwenzululwazi, izakhono zokubhala nesakhono sokwazi ukuxoxa ngezemfundo ephakamileyo.
Sibonelela ngotoliko oluqhutywa ngoku kwiilektsha zethu – ngesi-Afrikansi, ngesiNgesi, ngesiXhosa okanye ngoLwimi lweZandla lwaseMzantsi Afrika.
Sidale indawo ekhuselekileyo yokuxoxa ngokubhala komntu kunye nomcebisi wokubhala oqeqeshiweyo kwiLebhu yokuBhala yethu, kwakunye namathuba okudala amaqela enkxaso angokubhala, ukuthatha inxaxheba kwiimarathoni zokubhala, okanye ukuzimasa iiwekhshophu ezingokubhala iziphakamiso zophando, uphengululo loncwadi, amanqaku eejenali okanye okunye ukubhala kwemfundo ephakamileyo.
Simise iLebhu yokuFunda enikezela ngeewekhshophu, iingcebiso nenkqubo engumboniso ongokuqonda ukuze kuphuculwe ukufunda.
Sakhe isixhobo sesigama esingeelwimi ezintathu ukulungiselela isigama sezifundo ngesi-Afrikansi, isiNgesi nesiXhosa – sizame eapha: sun.ac.za/languagecentre-terminologies .
Sizisa izifundo ezahlukahlukeneyo kubafundi beli nabamanye amazwe ngeenjongo zokuphucula izakhono kulwimi oluthile okanye zokufunda ulwimi olutsha, zifundo ezo zinjenge-English for Academic Purposes Programme (EAPP) ne-Intensive English Programme (IEP), okanye izifundo ezilungiselelweyo zesi-Afrikansi nezesi Side sinayo neNdawo yokuFunda iiLwimi nelungiselwe ukufunda ulwimi lwentlalo.
IZiko leeLwimi liwuphosa ngokubanzi kunabafundi kuphela umnatha walo woncedo lwezeelwimi nonxibelelwano:
Sinikezela ngeenkonzo zohlelo noguqulo ngesiNgesi, ngesi-Afrikansi nesiXhosa kwaye siguqulela kwiilwimi ezizezinye ezili-12. Iinkonzo zethu zingafunyanwa ngabakwiYunivesithi, ngamaqumrhu angabaxumi nabantu ngabanye ngokunjalo, kwaye singahlela size siguqule naluphi na uxwebhu – ukususela kwiileta, iingxelo, amanqaku eejenali neekopi zeentengiso ukuya kwiifomu zonikezelo-mvume esekelwe kulwazi. Ngaphezu koko, sikwaguqula okuteyitshiweyo kube kokubhaliweyo.
Sibonelela ngenkonzo yotoliko kwiintlanganiso okanye kwiinkomfa. Sisebenza ngesi-Afrikansi, isiNgesi, isiXhosa nesiJamani, kodwa unako ukuthetha nathi nangezinye iilwimi ekunokutolikelwa kuzo.
Sinikezela ngezifundo zolwimi ezijoliswe kubantu ngabanye okanye amaqela angathanda ukufunda isiXhosa okanye isi-Afrikansi, okanye azilungiselele uviwo lweNkqubo yeHlabathi jikelele yoVavanyo loLwimi lwesiNgesi (IELTS) okanye abanqwenela ukufumana izakhono zokufundisa isiNgesi njengolwimi lwangaphandle (Teach English as a Foreign Language – TEFL).
Sizisa nezifundo ezifutshane zonxibelelwano lwakwiinkampani eziqingqwe ngokubalaseleyo ngeLebhu yethu yezoNxibelelwano. Cinga: amaxwebhu ase-ofisini asebenza kakuhle, ukubhalwa kweengxelo, ukubhalelwa kwabezopapasho, okanye ukuqulunqa iiprizenteshini ezikwenza uzive uzithembile; sibala ntoni na?
Thina, ulwimi lusinika ithuba lokwenza iinguqu, ezinamandla okutshintsha ubomi, okwenza izigqibo malunga nemigaqo-nkqubo nokumanyanisa abantu. Ukuba enye yeenkonzo okanye izifundo zethu zikunika umdla, thetha nathi kule dilesi taalsentrum@sun.ac.za okanye kule nombolo 021 808 2176.
Izinto ezinkulu ziyenzeka xa usebenza nathi!
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Dialogos Jongste nuus Nuutste nuus Ons tale SkryflabKe, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi?